Jery taratra… herinandro: misy hatrany ny vahaolana | NewsMada
Hisy ny fanadinana bakalorea fihodinana faharoa manokana amin’ny fianarana ankapobeny noho ny fivoahan’ny laza adina sasany mialoha ny fotoana. Amin’ny 23-26 oktobra ho avy izao ny hanatanterahana izany.
43 ireo nosamborina noho ny fivoahan’ny laza adina bakalorea mialoha ny fotoana ka enina ireo tanana vonjimaika am-ponja. Nomena fahafahana ny 20 ka tsy mahazo mivoaka an’Antananarivo ny sivy amin’izy ireo.
Tena nitrangan’ny fiparitahan’ny laza adina Antananarivo, Imerintsiatosika, i Fianarantsoa, Alakamisin’Itenina. Ankoatra ny mpampianatra sy ny mpianatra, nisy tomponandraikitra ambony ireo voasambotra.
Nanohy ny fidinana ifotony an’ireo boriborintany enina, Antananarivo Renivohitra, ny kandidà ben’ny Tanàna atolotry ny IRD, Andriantsitohaina Naina, ary nitondra vahaolana amin’ireo hetahetan’ny mponina.
Nifarana ny dinika momba ny Drafitra fisandratan’i Madagasikara, niarahan’ny governemanta amin’ireo vahiny mpiara-miombon’antoka vola sy teknika. Hivoaka afaka tapa-bolana ny soso-kevitr’izy ireo.
Namoaka fanambarana ny Sefafi: “Ny kolontsain’ny tombontsoa manokana: fampianarana ambony sy fampitam-baovao”. Voalazany amin’izany fa ireo sehatra roa ireo no tena anjakan’izay kolontsaina izay.
Manoloana izany, naneho ny heviny ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety fa tokony hanao ny asa fampahalalam-baavao ny Sefafi satria mahay. Iza no ao ambadika nampiteny ny Sefafi an’iny fanambarana iny?
27 miliara Ar ny volam-panjakana very tao anatin’ny herintaona vokatry ny tsy fanarahan-dalàna amin’ny fitantanam-bola, araka ny tatitry ny Filankevi-pifehezana momba ny vola sy ny fitantanam-bola (CDBF).
Nandray anjara tamin’ny fihaonambe momba ny Tahirim-bola iadiana amin’ny VIH/Sida sy ny raboka ary ny tazomoka tany Lyon, Frantsa, ny filoha Rajoelina, nilaza hampitombo ny tetibolam-panjakana ho amin’izany.
Amin’izany rehetra izany, misy hatrany ny vahaolana: fampiharan-dalàna, fifampidinihana, fanarenana … Eny, na eo aza ny zava-manahirana sy ny tsy fitoviam-pijery.